Eoropa Andrefana · Jolay, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Eoropa Andrefana · Jolay, 2012
Tantara mikasika ny Eoropa Andrefana tamin'ny Jolay, 2012
Angletera 30 Jolay 2012
Espaina 23 Jolay 2012
Afrika Mainty 19 Jolay 2012
Mau Mau telo fahiny mpiady ho amin'ny fahafahana no nitondra ny governemanta Britanika hiatrika ny Fitsarana Ambony ao Londona mitaky fifonana sy onitra noho ny habibiana nozakain-dry zareo nandritra ny fitonfdràna fanandevozan'ny Britanika an'i Kenya. Miraradraraka ireo bitsika mikasika ilay raharaha ho fanohanana ny tolona fikatsahan-dry zareo ny rariny. Mibitsika mivantana avy any an'efitrano fitsaràna i @JeromeTaylor sy @TandemLaw.
#TwitterEnCatalà Miteraka Bitsi-Pifaliana Sy Fankahalàna
Espaina 17 Jolay 2012
Ny 6 Jolay 2012, analiny ireo mpiondana aterineto miteny ny fiteny Catalan no nankalaza ny fahatongavan'ny fampiasana ny tenin'izy ireo eo amin'ny Twitter. Vetivety dia nanjary lohahevitra noresahana be tao Espaina ny tenifototra #twitterencatalà